Isonka esisikiweyo esipheleleyo | Ukupheka kweKhitshi
Ayinguye wonke umntu onesibindi sokwenza isonka ekhaya kwaye iyinkqubo eyonelisayo. bucala ngasekhohlo Isonka esidibeneyo Yeyona inkuthazo egqibeleleyo kwabo bangakhange bayizame okwangoku. Ngokukhawuleza kwaye kulula, iya kukuvumela ukuba ukonwabele ukwenza i-toast enkulu okanye isandwich efanelekileyo yesidlo sakusasa okanye i-snack.
Impelaveki ihlala ilixesha elifanelekileyo lokuhla uye kwishishini. Ayisiyomcimbi wexesha kuphela, kufanelekile ukuba ukhethe ixesha apho siphumle kwaye sikulungele ukonwabela inkqubo. Iziphumo ziya kuxhomekeka ikakhulu kwi umgangatho womgubo Sukuncipha!
Esi sonka sengqolowa siphela siyakuvumela ukuba ukhonze i-toast enkulu yesidlo sakusasa kunye nezinye iisendwitshi ezithambileyo.
Uhlobo lweRipeipe: ipani
Ixesha lokulungiselela: 2 h 30 imiz
Ixesha elipheleleyo: 3 h 15 imiz
350 ml. ubisi lonke kubushushu begumbi
20 g. yobusi
5,5 g yegwele lombhaki owomileyo
250 g. umgubo wamandla
250 g. umgubo opheleleyo
7 g. ityuwa
25 g. yebhotolo
Ioyile yomnquma ethambileyo yokuthambisa
Sixuba esityeni ubisi olunagwele kunye nobusi. Songeza umgubo kunye netyuwa. Songeza ibhotolo inyibilike ishushu kwaye ixove ngesandla ide ifakwe. Yima imizuzu eli-10.
Sithambisa itafile kancinci ngeoyile encinci, guqa imizuzwana eli-10 kwaye senza ibhola. Siyivumela ukuba iphumle eminye imizuzu eli-10. Knead imizuzwana eli-10 kwaye uvumele uphumle imizuzu engama-30.
Sigcoba kunye nomgubo wokungunda uxande kwaye malunga ne-30 cm ubude. Sibumba intlama, siyibeke kwisikhunta kwaye siyivumele ukuba ibile ide iphantse iphindwe kabini ngevolumu.
* Kufuneka siyiqonde into yokuba ukuphumla kufuneka kwenziwe kwikona efudumeleyo engenazidrafti. Ikhitshi kufuneka libe kubushushu obungapha ko 20-22ºC.
Sitshisa i-oven ngo 210º ngobushushu phezulu naphantsi.
Sixubha isonka ngobisi kwaye ubhake imizuzu eli-15.
Sisehlisa iqondo lobushushu le-oveni ukuya ku-180º kwaye Sipheka eminye imizuzu engama-30 malunga; kuya kuxhomekeka kwi-oveni nganye.
Sisusa ekubumbeni siye kwi-rack kwaye siyivumele ukuba ipholile ngokupheleleyo ngaphambi kokukhonza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ukupheka » Isonka esidibeneyo
Ikhekhe e-orenji eguqulweyo